“Askari Ayaa Igu Yidhi Aniga Xildhibaan Iima Tihid Ee Beel Ayaad U Tahay” Xildhibaa Ka Tirsan Baarlamaanka Soomaaliya | Raadgoob
“Askari Ayaa Igu Yidhi Aniga Xildhibaan Iima Tihid Ee Beel Ayaad U Tahay” Xildhibaa Ka Tirsan Baarlamaanka Soomaaliya
Xubno ka tirsan mudaneyaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa cabashooyin ka soo gudbiyay laamaha ammaanka, oo ay sheegeen iney si qallafsan oo ixtiraam darro ah ula dhaqmeen, arrintaas ayey dadka siyaasadda falanqeeya u sababeynayaan hannaanka beeleed ee baarlamaanka uu ku dhisanyahay.
Guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee uu fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay amar ku siiyay guddiyada difaaca iyo amniga ee aqalka iney muddo 48 saacadood ah jawaab uga keenaan cabasho ay xildhibaannada qaarkood ka soo gudbiyeen ciidamada booliska.
Arrintan ayaa timid ka dib markii dhowr xildhibaan ay sheegeen in shaqadooda laga hor istaagay xilli ay isku dayayeen iney soo gudbaan waddooyin ay shalay galinkii hore xireen laamaha ammaanka.
Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Cismaan oo loo yaqaanno Faliije ayaa sheegay in laga hor istaagay waddada isla markaana loo geystay xadgudub ixtiraam darro ah.
Mudahan ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in loo arkay qof howshiisu ay ku saleysantahay hab qabiil.
“Nin ka mid ah ciidanka booliska ayaa ii yimid anigoo ku jira gaarigeyga, waxaan tusay aqoonsigeyga waxaana u sheegay inaan ahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka, waxaan ku iri shir ayaan leenahay waxaana rabaa inaad i fasaxdid. Wuxuu igu yiri ‘xildhibaan aniga iima tihide, beel baad u tahay’…” ayuu yiri.
Xildhibaan Faliije ayaa intaas ku daray inuu halkaas ka dhacay qalalaase xad gudub ku ah xasaanaddiisa, kaa soo u dhawaaday inuu isku baddalo gacan ka hadal dhex mara booliska iyo ciidamo ilaalo ahaa oo isaga la socday.
Isla shalay, xildhibaan kale oo lagu magacaabo Mahad Salaad ayaa sheegay in rasaas lagu furay, shaqadiisana la hor istaagay xilli uu doonayay inuu ka gudbo isgoyska KM5 oo markaas ay ku sugnaayeen ciidamada amniga.
Xildhibaannada federaalka ma waxay sharaf darro kala kulmaan nidaamkii beeleed ee loo soo doortay?
Xildhibaannada baarlamaanka federaalka ayaa u muuqda kuwo aan ixtiraam fiican ka heysanin dhinaca shacabka iyo laamaha ammaanka, sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka u dhuun daloola arrimaha bulshada iyo siyaasadda.
Barfasoor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa BBC-da u sheegay in habka xildhibaannada aqalka baarlamaanka loo soo xushay uu si cad saameyn ugu leeyahay howshooda Qaran.
“Wax lala yaabo ma aha in xildhibaannada lagu yiraahdo waxaad xilka u heysaan beel, maadaama qaabkii lagu soo doortay uu ahaa hannaanka beeleed ee 4.5” ayuu yiri Prof Shirwac.
Hase ahaatee waxa uu sheegay in mudaneyaashu ay sharci ahaan yihiin kuwo ay shaqadooda tahay in ay si guud shacabka ugu adeegaan.
Sidee la isku waafajin karaa hannaanka xulashada beeleed ee 4.5 iyo waajibaadka qaran ee Xildhibaannada?
Barfasoor Shirwac oo ay BBC-da su’aashaas ka weydiisay ra’yigiisa ayaa yiri: “Waxaa adag sida la isu qabadsiin karo 2 qodob oo kala ah in xildhibaanka loo soo doorto hab beeleed ka dibna waajibkiisa uu noqdo inuu si guud shacabka ugu adeego”.
Aqoonyahankan ayaa hoosta ka xariiqay in ay jiraan xildhibaanno si daacad ah u guta waajibaadkooda, balse ay jirto saameyn aan fiicneyn oo sharaf ahaan ka soo gaarta mudaneyaal kale oo lagu xanto iney danohooda gaarka ah u adeegsadaan xilkooda.
Bulshada ayuu sheegay iney mar walba niyadda ku hayaan xaqiiqada ah “in tiro badan oo ka mid ah xildhibaannada ay shakhsi ahaantoodna u shaqeystaan beesha ay ka soo jeedaanna u adeegaan”.
Rajo intee la eg ayaa laga qabaa in baarlamaanka Soomaaliya loo soo doorto hab deegaan?
Xildhibaan Faliije: Askari baa igu yiri “xildhibaan aniga iima tihid, beel baad u tahay”
Cabdulaahi xerada Dhadhaab ayuu ku noolaa hadana waa xildhibaan
Shaki iyo qabyaalad ka jirta Shacabka dhexdiisa ayaa sabab u ah iney yaraato rajada laga qabo in horumar laga gaaro sidii doorashada xubnaha baarlamaanka loogu saleyn lahaa hab deegaan, sida uu qabo Barfasoor Shirwac.
Dhanka kale, Dadweynaha qudhooda ayaa qeyb ka ah dhaliilaha ka dhanka ah mudaneyaasha baarlamaanka oo lagu eedeeyo iney qaarkood inta badan adeeggooda ku koobaan dano shakhsiyeed iyo kala aragti duwanaan salka ku heyso mooshinno siyaasadeed.
Marar kale oo hore ayay mudaneyaasha dacwado noocan ah ka soo gudbiyeen laamaha ammaanka, iyagoo dalbaday in taliska booliska ay ciidanka baraan hab dhaqanka wanaagsan ee lagu wajaho mudaneyaasha baarlamaanka iyo aqoonsiga xasaanaddooda.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale kulankii shalay ka jeediyay baaq ku aaddan in la ixtiraamo mudaneyaasha aqalka sharci dajinta.